Iziphakamiso kwindlela yokusebenzisa ukufunda ngesihloko
Ukufunda ngokubanzi ngesiNgesi ngoncedo lwesichazi-magama esihle sesiNgesi kwiintlobo ezahlukeneyo zobomi bokuba yindlela enye yokufunda isiNgesi isigama. Ekubeni kunomlinganiselo omkhulu wezinto zokufunda ngesiNgesi, umfundi weNgesi kufuneka abeke phambili ukufunda kwizifundo ngokweemfuno zabafundi zokusebenzisa isiNgesi ukuze ziqale izibhalo ezifunekayo, ezifanelekileyo kunye neziqhelekileyo ezisetyenziswa rhoqo.
Imixholo yemihla ngemihla ifanele ifike kuqala ekufundeni.
Ukufumana Izinto zokuFunda
Izinto zokufunda zingahlelwa yinkalo yobunzima besigama-kubafundi ekuqaleni, amazinga aphakathi kunye aphakamileyo. Abafundi banokukwazi ukufumana isicatshulwa esibalulekileyo kakhulu kwisiNgesi ngokufunda izibhalo (imibandela), okokuqala ezintlanganisweni zemihla ngemihla ebalulekileyo kunye nomxholo obalulekileyo, umzekelo: Iingcebiso eziSebenzayo kunye neengcebiso zokwenza Ubomi Bemihla ngemihla kwaye buhle (izixazululo ezisebenzayo kwiingxaki zemihla ngemihla). Iincwadi ezinjalo zokunceda ekulungiseleleni imiba yemihla ngemihla ziyafumaneka kwiivenkile zokuthenga.
Ukongezelela kumathekisthi okufundisa okubhaliweyo (izixhobo), abafundi bangafunda iintetho zeengxoxo eziqingqiweyo (iisampula zengxoxo zangempela ebomini phakathi kwabantu), amabali anengxelo elandelwayo, iincwadi ezintle, amaphephandaba, iimagazini, izinto ezifumaneka kwi-intanethi, iincwadi kwiintlobo ezahlukahlukeneyo, izichazi-magama eziqhelekileyo zesiNgesi, njl njll. .
Izichazi-magama eziqhelekileyo zesiNgesi zilungelelanisa isigama-magama ngongoma (izihloko) kwaye zibonelele ngokucacileyo ukusetyenziswa kwegama kunye nezivakalisi ezimbalwa zokusetyenziswa kwegama ngalinye, elona luleke kakhulu.
Izichazili zesiNgesi zinika iinkcazo zokusetyenziswa kunye nemizekelo yokusetyenziswa ngamagama anentsingiselo efanayo. Iingcali eziqhelekileyo zesiNgesi ezichaziweyo kunye neentsingiselo zesiNgesi ziyizona zixhobo ezixabisekileyo zokufunda isiNgesi isigama ngokucacileyo, ngokucacileyo nangokunyanisekileyo kwizidingo zobomi bokwenene zabafundi.
Iilayibrari zoluntu ezilungileyo zikhethwa ngokubanzi kwizinto zokufunda zesiNgesi.
Ukwandisa isigama ngokuFunda
Kungcono ukuba abafundi babhale phantsi isigama esingaziwa kwizivakalisi ezipheleleyo ukuba bakhumbule intsingiselo yegama lula. Kuya kuba yinto efanelekileyo yokuthetha kubafundi bathetha umxholo weetekisi abazifundileyo. Abafundi banokubhala amagama abalulekileyo kunye neengongoma, okanye iingcamango eziphambili njengecebo, okanye imibuzo ebhaliweyo efuna iimpendulo ezinde ukuze kube lula abafundi ukuba baxelele umxholo wesicatshulwa. Ndiyakholwa ukuba yinto efanelekileyo yokufunda i-chunk enengqiqo okanye umhlathi wesicatshulwa kwaye ulandelele ngamnye umhlathi ngokwahlukileyo, kwaye ke umbhalo wonke. Njengoko abantu bathi, ukwenza oku kwenzayo kugqibelele.
Iyintoni Injongo Yelizwi LwaseFransi elithi Faire le Pont?
Indlela yokusebenzisa imifanekiso yesiFrentshi 'N'Importe Quoi'
I-Knights Templar eyaziwa ngokuba yi-Monks Warrior
UKurt Gerstein: I-Spy Spy kwi-SS
IToyota Tundra Diesel Iprojekthi yeProjekthi yeProjekthi
U-Anne waseHanover, iNkosana yase-Orange
Ukugqithisa okulungileyo kwiNtsebenzo
Iqela le-Alkoxy Definition
Biography kaVasco Nuñez de Balboa